QUUSANAYE KEE HORDHICI QARAN SOMALIA IYO QIYAAMAHA?
Marka aad dhab u eegto Cinwaanka qormadan wuxuu kuula muuqandoonaa Rajobeel balse ilaah ayaa waxa soo socda ogaalkeeda leh ee waxaan qiyaasi doonaa sida ay iila ekaatay.
Somalida wixii ay weyso ayay ku tilmaantaa wax aan dhicibarabin oo inta la sugayo Qiyaamaha ka dhacayo marka la saadaaliyo xaalada Jaah wareerka iyo dhibaatada Rubac Qarni gaadhay oo aad fiiriso Maxaa la isku haystaa waxaad garowsan in aanahay dadka aan la aqoon waxa ay doonayaan,
Marka aad dib u gocato Sanadihii burburka oo aad xasuusato asxaabtaadii ama Dhalinyartii aad dariska ahaan jirteen oo aad ogaato in ay barakaceen inta badana baaba,een , Markaad u laabato kuwa hada jooga fakarkooda iyo dhibaatadu halkaymarayso ayaa waxaa durba niyada kaa haleelaya rajaxumo kaaga muuqanaysa in Qaran Somaliyaba uusan soo socon.
Waxaa maalinba maalinta ka danbaysa dhagahaadu sii maqlayaa dhawaq Naxariis la aaneed iyo xaalad dhibaato , waxaad dhagaystaa waa dhibka iyo Baaba,a umada somaliyeed marna dhagahaadu maqlimayaan horumar iyo wanaag ku saabsan dalkeena iyo dadkiisa.
Waxaa hubaal ah oo aan qarsoonayn Muwaadin kasta oo Soomali ah marka uu isku dayo in uu micne u raadiyo sababaha Dadkiisa iyo Dalkiisu dhibaadataan ugu jiraan ama sababta diidan nabad ka dhalata Gayigeena waxaa u soo baxaysa Jawaabta =0) oo ah in aysanba jirin wax la isku haysto ee arintu tahay Dhibku dhalo kuna jir ilaa dhimashaadaada ka imaanayso.
Laga soo bilaabo Xiligii ay jabhada Abaabulan la wareegeen Somalia Lagana raacdeeyay madaxweynihii Soomaaliyeed Maxamed Siyad bare ayaa waxaa Maalinba maalin lagu sii amaahanayaa in la helo Kala danbayn iyo Nabad laakiin Howsha ayaa ah mid aan Alle Xagiisa ka noqon waxaana habeenkata Umada soom aaliyeed Marti u yihiin Mayd iyo Mucjisooyin dagaal aan dhamaad lahayn.
Aduunka Colaadi waaka dhacdaa iyo Dagaal laakiin umad kastaa waxay Nasiib u yeelataa in ay ka heshiido isna dhax galaan balse Dadkeena Soomaliyeed Maxaa sidaani baday.
Maxaa Dadkeena u diidan nabada miyaysan Nabadu macaanayn?
Maxay ugu faanaan Colaada miyaysan Noloshu qiimaba ulahayn?
Maxay isu Dilaan dil aan qiil lahayn Miyaysan Alle Aqoon islaam ayayba sheegtaane?
maxaa garashada wanaagsan u diiday miyaysan wax garad lahayn?.
Somaliyey hadii aan su,aalo kale idin sii waydiiyo
Hadii aan bari hore Jabhada Qabiil dadkeena dhameeyeen markale Huggaamiye kooxeed u xirnayn oo dadku ku dhimanayeen gacan hugaamiye kooxeed Qabiil ku daaban, Hadana aan u gudubnay in aan isu dilno Dowlad aan raali laga ahayn iyo Dadka soomaaliyeed markake isu dilnay Kacdoono iskood u baabulan, Marna ay gacan cadow oo anan gabaad aan ka galno haysan ay naga aargoosatay walina aad u jeedno calooshood u shaqaystayaal cusub oo u diyaara dilaanimada dadkooda .
Intaas iyo inka badan markaad isweydiiso waxaa niyadaada soo galaya haba dhowran in Dal aad leedahay ku raaxaysato ama ku faanto.
Geedi socodaka dhibaatada tii ugu niyadjabka iyo calool xumada badnayd
Ilaahbaa umadeena ku manaystay wanaaga diinta islaamka oo ah shay aysan helikarin qof aana ilaah ugu talo gallin aydadoo sidaasi ay tahay ayaan hadana umadeena Soomaaliyeed aysan waxba uga badalanayn wadamada cilmaaniga ah ayagoo ay ka maqantahay dhowritaanka iyo ilaalinta xaquuqda qofka islaamka ah uu ku lee yahay islaamka dhaxdiisa iyo xadka ilaah uu siiyay qofka islaamka ah oo ay dhaafeen.
Waxaa iska caadi noqotay in ninka masaajidka ka soo baxa la dilo asaga oo aan aqoon sababta lagu dilay iyo waxa uu galabsaday waxaa sidoo kale midka dilay uusan haysan sabab rasmi ah oo uu ku dilay walaalkiisa muslim ka ah, taasina waxay jawaab cad u tahay in la gaaray xiligii ilaah nuugu yaboohay in umadaani isdili doonto sabab aan midka wax dilay iyo ka ladilayba uusan aqoon jawaabteeta.
Waxaa kale oo calool xumo iyo murugo uur ku taalo ah in dagaal uu dhex marayo mararka qaar laba garab diimeed oo midkastaa midka kale ku tilmamayo gaalnimo iyo kufri uu ku jiro taasina waxay kaliftaa in ay dagaalamaan waliba ayaga oo ku sheegaya Jihaad ay jana ku galayaan ma u qaadan kartaa in ay jawaab cad oo aan la dafiri karin u tahay xadgudubka ay umada soomaaliyeed ka galeen diinta islaamka oo ah mid xaaraantinimaysay dilka iyo is cadaaweynta walaalaha islaamka .
Duulkii la royahaa ra,i ma yeeshaani bal eeg sidan.
Dhulka oo rogmada waa midka mid ah Imtixaanka aadaha looga abaalmariyo dhibaatada uu gaystaye
1. hadii ilmihii soomaliyeed ay dilayaan ehelkoodii ayaga oo sheeganaya in ay diin difaacayaan.
2. Hadii aabihii soomaaliyeed oo gadanayo dhiiga wiilkiisa uuna daboolsaarayo xukunka ilaah u dajiyay qofka qofkale dila in lagu abaal mariyo.
3. Hadii aqoon yahanku wax u barto xaasid nimada qolo uu qabiil ahaan iyo gobol ahaan uga soo horjeedo.
5. Hadii sheekhu ama Culimadu diitii sikale u micneeyaan xaasidnimo uu wadaad kale u hayo aawdeed .
6. Hadii ninkii la aaminaa mas,uuliya la saaray uu ka jecel yahay qabiilkiisa iyo qiyaamada umada soomaaliyeed .
Hadii hay,adaha umada u dhaxeeya sida Saxaafda ay qabiilkooda ka jeclaadeen u shaaqaynta danaha dad kooda .
Sow kama uur godid in somalia oo mid ah aad aragto ama ayada oo nabad ah
Waa socdaa maqaalkan
WQ/: Shariif C/nuur Xassan (shafka)